3 Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka Mid Device Samsung in kale
3 Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka Samsung in Samsung
Marka bedesheen ka ah phone jir Samsung in mid cusub, mid ka mid ah mashaakil ugu weyn in aad la kulmi kartid waa sida si ay u gudbiyaan xiriirada ka Samsung in qalab Samsung.
Horaantii, marka casriga ah aan la soo saarin iyo xitaa Android ma jiraan, dadka loo isticmaalaa in lagu gacanta ku dari xiriir kasta oo ka mid ah-by-ka mid ah ay telefoonka cusub ka hor inta iyaga tirtiro ka wayn hal. Habkan oo dhan ku qaadan jirtay dhawr saacadood oo ay sabab u tahay ka-qabashada buuggan, marar badan xiriirada lagu daray si qaldan.
Android adkaaday xaddidaadda iyo hadda ka mid phone Samsung aad wareejin karaan xiriirada oo dhan ka kale gudahood ilbiriqsi oo dhamaystiran saxnimada.
3 hababka ugu fudud oo ugu taliyay u Samsung xiriirada kala iibsiga kala yihiin:
1. Samsung Contact Transfer via Bluetooth
2. Samsung Contact Transfer via vCard
3. Transfer Samsung Xiriirada HAL Click la Mobiletrans
Hage talaabo-talaabo kasta oo ka mid ah hababka kor lagu soo xusay waxaa la siiyaa hoos ku qoran:
Xalka Transfer 1. Samsung Contact via Bluetooth
Habkan, telefoonka waaweyn waxaa loo baahan yahay in aad dooratid dhammaan dadka ay khuseyso in aad rabto in lagu wareejiyo, iyo la bilaabo nidaamka kala iibsiga Bluetooth. Ayaa dareemi dhibic halkan waa, ka hor inta wareejinta xiriirada via Bluetooth, iyaga dhoofinta phone Samsung in vCard ah (.vcf) file. File .vcf waxaa markaas soo diray inay phone bartilmaameedka via Bluetooth oo xiriir ah waxaa loo soo dhoofiyo, waxa uu. Hoos waxaa ku qoran tilmaamaha tallaabo-tallaabo ah si aad u samaysay hawsha:
Fiiro gaar ah: Samsung Galaxy Note 4 halkan loo isticmaalo bandhig.
1. Power on your labada casriga ah Samsung cusub iyo kii hore.
2. Waxaad hubisaa in aad u Jeediyey on Bluetooth labada telefoonada ah.
3. Sidoo kale si loo hubiyo in labada dhinacba in ay telefoonada lamaanahaaga kasta oo kale oo u kala iibsiga Bluetooth siman. Si loo xaqiijiyo isku xirnaanta, waxa aad mid ka mid ah telefoonada ee mid kale ku wareejin kartaa file yar.
4. isha Samsung telefoonka ka meesha aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada, furo dhaansha Apps.
5. Laga soo bilaabo calanka u soo bandhigay, hel oo ka jaftaa Xiriirada .
6. Xiriirada interface ah, tab iyo hay mid ka mid ah xiriirada ka mid ah liiska.
7. Marka la xiriir karoos la doorto, ka jaftaa checkbox ka ugu sareeya ee suuqa kala ah in ay doortaan oo dhan xiriirada ku jira liiska.
Fiiro gaar ah : Haddii kale sidoo kale waxaad ka eegi kartaa checkboxes shaqsi si ay u gudbiyaan xiriirrada la xushay.
8. Marka xiriirrada la doonayo waxaa lagu soo xulay, ka jaftaa Share icon ka sare ee daaqadda.
9. From fursadaha soo bandhigay, tuubada Bluetooth icon.
10. Laga soo bilaabo liiska qalabka Bluetooth aaday, ka jaftaa mid ka mid ah oo aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada.
image tallaabo 7 image tallaabo 9 image tallaabo 10
11. On target Samsung qalabka meesha aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada, aqbali file soo socda oo sug ilaa hanaanka wareejinta si guul ah u dhameystiray.
Xalka Transfer 2. Samsung Contact via vCard (.vcf File)
Habkani waxa uu leeyahay talaabooyin dheeraad ah marka loo eego habka hore, laakiin wuxuu ku soo laabto waxa ay ku siineysaa kantarool badan marka ay timaado doorashada qalab Ahaado (s). In Samsung telefoonada gacanta (dhab ahaantii in ku dhowaad dhammaan taleefanada Android), waxaa jira ka dhisay-in Import feature / Dhoofinta kuu ogolaanaya inaad si ay u dhoofiyaan dhan xiriirada si aad u ah vCard (.vcf) file. File vCard ayaa markaa loo gudbin karaa wax Samsung (ama cid kale oo Android) qalab iyo xiriirada ee faylka halkaas laga keeno kartaa waqti ka waynay. Iyadoo file .vcf ku abuuray isticmaalka habkan, faylka loo gudbin karaa qalabka kala duwan Android iyo Apple iyo xiriirrada isku mid ah la keeno karo iyaga. Tani waa mid waxtar leh markii aad leedahay qalab badan ama aad rabto in aad xiriirrada isla in lagu daro ee telefoonada ee dhammaan xubnaha qoyska. Geedi socodka tallaabo-tallaabo ah dhoofinta xiriirada ka mobile il ka dibna iyaga loo dhoofiyo si ay telefoonka bartilmaameedka ah waxaa lagu sharaxay hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah : Samsung Galaxy Note 4 halkan loo isticmaalo bandhig.
1. Power on isha Samsung telefoonka.
2. Fur dhaansha Apps.
3. Laga bilaabo calanka u soo bandhigay, tuubada Xiriirada .
4. Ka suuqa kala xidhiidho, ka jaftaa ikhtiyaarka More (ikhtiyaar leh saddex dhibcood vertical) dhankiisii ​​top-xaq.
5. Laga soo bilaabo menu soo bandhigay, tuubada Settings .
6. tuubada Xiriirada doorasho ka Settings uu furmo suuqa.
image tallaabo 3 image tallaabo 5 image tallaabo 6
7. Ka interface soo socda, tuubada / Dhoofinta Import xiriirada doorasho.
8. Marka / Dhoofinta Import xiriirada sanduuqa soo booda, tuubada dhoofinta kaydinta qalabka doorasho.
9. On the Xaqiiji dhoofinta sanduuqa, la soco ama xafidi meesha uu caga meesha file vCard lagu kaydin lahaa ka dib markii la soo xerooto ka jaftaa OK .
image tallaabo 7 image tallaabo 8 image tallaabo 9
11. Marka sameeyo, u tag file ee goobta badbaadin iyo file .vcf ku wareejiyo qalab bartilmaameed Samsung oo isticmaalaya mid ka mid ah hababka kala iibsiga aad ka doorteen (sida Bluetooth, NFC (ma laga heli karaa dhammaan taleefanada Samsung), ama isticmaalka PC ah sida a qalab dhexe).
12. Ka dib file .vcf ayaa loo wareejiyay diirada Samsung telefoonka, telefoonka diirada laftiisa, raac tallaabooyinka kor ku xusan laga bilaabo 1 ilaa 8 halka doorashada Import ka qalab lagu kaydiyo doorasho marka on tallaabo 8.
13. On the Save xiriir si sanduuqa, tuubada Device .
14. On soo bandhigay Select vCard file sanduuqa, in la hubiyo in ay Import vCard file button radio la doorto oo ka jaftaa OK .
15. Ka sanduuqa ku xiga, ka jaftaa in ay doortaan badhanka radio matalaya file vCard in aad kaliya wareejiyo tan casriga cusub.
16. Tubada OK si ay u bilaabaan soo degida xiriir ah.
image tallaabo 13 image tallaabo 14 image tallaabo 16
17. Ka dib markii ay xiriir ah ayaa la keeno, waxaad iyaga masixi karaan telefoonka ka weyn aad iyo bilaabi kartaa adigoo isticmaalaya telefoonka cusub sida caadiga ah.
Solutoin 3. Xiriirada beddelashada via Wondershare MobileTrans
Inkasta oo ah software bixisay, Wondershare MobileTrans ka dhigaysa wareejinta xiriir quruxsan fudud oo toos ah. Marka la isticmaalayo Wondershare MobileTrans, oo dhan aad u baahan tahay in ay sameeyaan si ay u gudbiyaan xiriirada ka telefoonka jirka ka mid ah oo cusub waa in lagu xiro labada telefoonada si ay PC, furitaanka Wondershare MobileTrans iyo wareejiyo waxyaalaha jeclaaday inuu telefoonka cusub. MobileTrans Sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si buuxda u masixi xogta jir ka phone caga hor wareejinta xiriir ah, waxa uu. Tan waxaa la samayn karaa adigoo checkbox hal. The tilmaamaha tallaabo-tallaabo si ay u gudbiyaan xiriirada ka phone jir Samsung in mid cusub ayaa la siiyaa hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah : Samsung Galaxy Note 4 iyo Samsung Galaxy Tab (GT N8000) halkan loo isticmaalo sida il iyo caga qalabka siday u kala horreeyaan mudaaharaad.
1. Log on in aad Windows PC la account maamule kasta.
2. Fur browser web oo aad doorato wax oo taga si http://www.wondershare.com/phone-transfer/ .
3. Download edition ku haboon ee Wondershare MobileTrans sida madal nidaamka hadda hawlgalka in aad isticmaasho kasta.
4. Ka dib dajinta, isticmaalin habka caadiga ah si loo soo dajiyo barnaamijka on your computer.
5. Marka si guul ah lagu rakibay, bandhigista Wondershare MobileTrans by double-gujinaya ay toobiye icon ka desktop-ka.
6. Laga bilaabo interface ugu horeysay, riix Phone in Transfer Phone doorasho ka qaybta bidix.
7. Marka uu furmo suuqa soo socda soo, xiriiriyaan labada telefoonada Samsung jir ah oo cusub si ay u PC isticmaalaya fiilooyinka ay xogta u dhiganta.
8. Sug ilaa Wondershare MobileTrans ogaadaa ee telefoonada xiran.
9. Check haddii aad isha iyo bartilmaameed telefoonada waxaa la geeyaa hoos Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybaha ay u kala horreeyaan. Hadii taasi dhici waydo, waxaad riixi kartaa Flip button xarunta si uu meel telefoonada ee qaybaha ay sax ah.
10. Marka lagu sameeyey, ka mid ah liiska ku jira joogo qaybta dhexe ee interface ka, guji in ay doortaan Xiriirada .
11. Ugu dambeyntii riix Start nuqul button aad u bilowdo nidaamka xiriir kala iibsiga.
Fiiro gaar ah : Optionally, waxaad riixi kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul checkbox ka hoose ee qaybta meel loo ahaadana iyadaa u, iyo riix Xaqiiji button ka Clear macluumaadka telefoonka sanduuqa xaqiijin si ay u oggolaadaan Wondershare MobileTrans in masixi xogta ka phone bartilmaameedka hor dayanayaan cusub Xogta waxaa si.
12. Sug ilaa xiriirada aad wareejiyo telefoonka cusub oo mar habka dhameystiray, aad barkinta kartaa telefoonada iyo bilowdo in aad isticmaasho sida caadiga ah.
Inkastoo ay jiraan siyaabo badan oo kale si ay u gudbiyaan xiriirada aad ka mid smartphone Samsung in kale, 3 hababka kor lagu sharaxay waa kuwa ugu fudud oo ay ugu talinayaa in dadka isticmaala guriga iyo professionals.S
4 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Manager Samsung Task
Samsung Kies Driver, Halkee waxa Download
3 Siyaabaha kaabta Samsung Galaxy S5
> Resource > Samsung > 3 Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka Samsung in Samsung